(L) ၀ က်ဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမောင်းနှင်နေသလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
အဆိုပါ Net ကယ့်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသို့အသစ်သုတေသန.
tweets, စာသားများ, အီးမေးလ်များ, ပို့စ်များ။ နယူးသုတေသနအင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအထီးကျန်နှင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြောပါတယ်စိတ်ဓာတ်နှင့်ပင်စိတ်ရောဂါပိုမိုလွန်ကဲပုံစံများကိုဖန်တီးစေခြင်းငှါ, တိုနီ Dokoupil သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်.
တိုနီ Dokoupil ဖွငျ့ | ဇူလိုင်လ 9, 2012 1: 00 AM EDT
သူကအင်တာနက်သမိုင်းမှာအများဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗီဒီယိုဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီ, ယာသုန်စယ်တစ်နှစ်ခွဲ-နှလုံး Web ကိုရှေ့တော်မှောက်ခဲ့သည်။ မိမိအယူကျု့အကောင့်သေ, သူ၏ Facebook နှင့် Twitter စာမျက်နှာများတွင်ဆိတျပုံနဲ့အိမ်ပြန်ဥယျာဉ် updates များကိုတစ်ဦးစေီးကွောငျးခဲ့ကြသည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာအလေ့အထများသူ့ကိုတူသောခံစားရလုပ်သည့်အခါအဆိုပါ Web ကို "ကျွန်တော်တို့ကိုတူသောမည်မျှလူများ၏လမ်းကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်" ဟုသူကထင်, လုပ်. မခံခဲ့ရ "ဟုပါရမီတစ်ခုစှဲလမျးသူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး megalomaniac" ဟုသူကယုံကြည်သူ, နေ့ရက်ကာလအဘို့ unplugged, အဆိုပါ humorist အန်ဒီ Borowitz စယ်မယ့်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် tagged တဲ့ tweet ထဲမှာထားအဖြစ်, "ကကွန်ပျူတာများကို turn off နှင့်အစစ်အမှန်လောကရှိအမှုအရာလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ "
သို့သော်ဤအတိတ်မတ်လစယ်ဘာမှကို turn off ဖို့ရုန်းကန်။ သူက "Kony 2012" ဟုအာဖရိကစစ်ဘုရင်ယောသပ်သည် Kony အကြောင်းကိုသည်သူ၏နက်ရှိုင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေး Web ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှ link တစ်ခုထပ်ဆင့်။ အဆိုပါအယူအဆသည်သူ၏ပြစ်မှုများရပ်တန့်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် Kony ကျော်ကြားအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါဖို့ပဲ။ ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်သလိုပဲ: ရုပ်ရှင်တစ်ပါတ်ထက်လျော့နည်းကျော် 70 သန်းအမြင်များ clocking, ဆိုက်ဘာစပေ့မှတဆင့် hurtled ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စယ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ မိမိအမစ်ရှင်ထောက်ခံကြောင်းတူညီတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေကိုမရပ်မနား kudos နှင့်ဝေဖန်မှုများသူ့ကိုဖော်ထုတ်, သူ့ psyche မှာကိုက်ဖြတ်ပုံ, သစ်မီဒီယာနဲ့သူ့ရဲ့ arm's-အရှည်ကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်။
သူကထူးထူးဆန်းဆန်းတွစ်တာ updates များကိုတစ်လောကဓာတ်ကိုထုတ်လုပ်ပထမလေးလက်ထက်ကာလ၌နှစ်နာရီအိပ်ခဲ့ရတယ်။ သူကမှနောက်လိုက်တိုက်တွန်း, John Lennon နှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့ကာတွန်းအင်တာဗျူး "ငါပင်လယ်ဖျံကြီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး" ကို "သင်၏စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ကိုစတင်ပါ။ " သူကသူ့တက်တူးထိုး, TIMSHEL ၏ရုပ်ပုံကိုစလှေတျ, ကောင်းမကောင်းကိုမကောင်းသောအကြားလူသားရဲ့ရွေးချယ်မှုအကြောင်းသမ္မာကျမ်းစကားလုံး link တစ်ခုကိုစလှေတျ ။ တစ်ကြိမ်မှာသူအပ်လုဒ်တင်ပြီးနှင့်သူ၏မိခင်ကနေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ အခြားမှာသူသည်စိတ်ကို-ကွေးရုပ်ရှင်စတင်ဖွဲ့စည်းဖို့ "အိပ်မက်အထဲမှာအိပ်မက်။ " သူ၏ဘဝနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
မိမိအထူးဆန်း, 21st ရာစုရေဝဲ၏အဋ္ဌမနေ့တွင်သူသည်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း tweet တဲ့မာတင်လူသာကင်း Jr ကနေကိုးကားစလှေတျတျော .: "သင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့, မ run နိုင်မယ်ဆိုရင်လျှင်သင်, run ထို့နောက်ပျံသန်းမနိုင်လျှင် သငျသညျတွားထို့နောက်လမ်းလျှောက်လို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘာပဲသင်ပြု, သင် "ရှေ့သို့ရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ကတညျးပြန်အစစ်အမှန်လောကသို့သွားလာ၏။ သူကသူ့အဝတ်အစားတွေကိုချွတ် ယူ. သူထပ်တလဲလဲနှစ်ဦးစလုံးလက်ဝါးနှင့်အတူကွန်ကရစ်ပါးရိုက်ခြင်းနှင့်မာရ်နတ်အကြောင်းကို ranted ဘယ်မှာ San Diego မှရှိသူ၏နေအိမ်အနီးရှိအလုပ်များလမ်းဆုံ၏ထောင့်မှသွား၏။ ဤသည်မှာလည်းဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုဖြစ်လာပါသည်။
ထိုနောက်မှစယ် "reactive စိတ္တ," ယာယီရူးသွပ်ခြင်းတစ်ပုံစံနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။ ဒါဟာသူ့ဇနီး, Danica တစ် blog post တစ်ခုတွင်အလေးပေး, မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့ခြင်းနှင့်စယ်ထားရှိမည်သောစက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အရာအားလုံးကိုသူဆိတ်ကွယ်ရာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်ကိုပင်အဖြစ်ချိတ်ဆက်။ "ကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်သော်လည်း," Danica ဆက်လက်စယ်မယ့်ပေးထား "ဆရာဝန်တွေဒီဘုံအတွေ့အကြုံ, ဆို" "တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-နှစ်ဦးစလုံးစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်လှောင်ပြောင်ရန်ဆွေမျိုးအမည်ဝှက်ထဲကနေရုတ်တရက်အကူးအပြောင်း။ " ကျော်လေးလအကြာတွင်ဂျေဆန်ဆေးရုံထဲကဖြစ်ပါတယ် , သူ့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပြန်လည်နာလန်ထူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ဇနီး Twitter ပေါ်တွင်တစ်ဦး "တိတ်ဆိတ်၏လ" ကိုယူ။ ဂျေဆန်ရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်မှောင်မိုက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ဝဘ်စိတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုပေါ်တိုနီ Dokoupil ။
စိတ်ကိုအပျေါအငျတာနကျရဲ့ deleterious ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာမှာအနည်းဆုံး hyperlink များကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ပင် Web ကိုသံသယဝါဒီတို့နည်းပညာအသစ်ကျွန်တော်ထင်ပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ခံစားရ-ပါစေတစ်ဦးတည်းကိုကြီးစွာသောအမေရိကန်အထောက်အကူပြုအံ့သောငှါစိတ်ကူးလျှပ်စစ်အလင်းမှာကြံဝှေ့ယမ်းသို့မဟုတ်လေးတွေများအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအပြစ်တင်ကဲ့သို့မိုက်နှင့်အနုံစဉ်းစားအက်ကွဲ-Up-ခဲ့သည် ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ။ အဲဒီအစား, အင်တာနက်ကိုဖွင့်အခြားအလတ်စားတစ်ဦးဖြန့်ဝေမှုစနစ်မ diabolical စက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလူတွေကိုပျော်ရွှင်ပြီးပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ အဘယ်မှာရှိသနည်းအထောက်အထားမဟုတ်ရင်ခဲ့သလဲ
အခုတော့သို့သော်အထောက်အထားတက်ပုံမှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကောင်း, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသနထွန်းသစ်စသည်နှင့်ရုပ်ပုံက်ဘ် utopians ၏တံပိုးပေါက်ကွဲမှုများခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီထက်အများကြီး gloomier ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို-ခရီးဆောင်၏လက်ရှိလူ့ဇာတိ, လူမှုရေး, အရှိန်နှင့် All-နေရာအနှံ့-စခွေငျးငှါ psychotic ပင်လုံးလုံးလြားလြားရုံ dumber သို့မဟုတ်အထီးကျန်ပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်, obsessive-compulsive မှကျရောက်နေတဲ့နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှုမမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုမပေးအောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့စိတ်ထဲတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကဲ့သို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်တယ်, သာမန်လူတွေဝမ်းနည်းနှင့်ထင်ရသောအသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြိုနေကြတယ်။
သားရဲ မှစ. ကပို
•သီးသန့်: Tom Cruise's Year Seminary မှာ
1996 ၏နွေရာသီမှာတော့ MIT ကမှာခုနစျပါးငယ်ရွယ်သုတေသီများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကို virtual ကမ္ဘာထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်နထေိုငျလူနှင့်ကွန်ပျူတာအကြားလိုင်းများမှုန်ဝါး။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာရေဒီယို-က transmitter ကီးဘုတ်ယူသွားပြီးကလစ်-On screen ကိုသူတို့မျက်စိများ၏ရှေ့မှောက်၌။ သူတို့က "Cyborg" သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုခေါ်ကတညျးသူတို့မထင်မှတ်ခဲ့သညျ။ ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်သူရှယ်ရီ Turkle, MIT ကတစ်ဦးစိတ်ပညာရှင်အဖြစ်, "ယခုကြှနျုပျတို့အားလုံး Cyborg ဖြစ်ကြသည်။ " အထဲကထောက်ပြစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှု၏ဤဘဝပုံမှန်ပုံပေါ်လာပေမယ်ကြောင့်ကျန်းမာသို့မဟုတ်ရေရှည်တည်တံ့မယ့်ဟုကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး, နည်းပညာ-မှပြောခြင်းတို့နဲ့အဖြစ် အဟောင်းကိုလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့၏အကြောင်းရင်းအပေါင်းတို့နှင့်ဘဝပြဿနာများ၏ရန်ဖြေရှင်းချက်အရက်-ဖြစ်လာသည်။
တစ်ခုတည်းကလေးဘဝ၏သက်တမ်းထက်လျော့နည်းမှာတော့အမေရိကန်တွေအနည်းဆုံးရှစ်နာရီနေ့အဘို့မျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်, သူတို့ရဲ့စက်တွေနှင့်အတူကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတဲ့အပါအဝင်အခြားမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဖြုန်းခြင်းထက်အချိန်ပိုမိုပေါင်းစည်းကြပါပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်ပျမ်းမျှကျောင်းကိုတစ်ရက်သို့မျက်နှာပြင်အချိန်အချို့ကိုခုနစျပါးနာရီ fit; 11, သင်အတော်ကြာကိရိယာများပေါ်တွင် multitasking သုံးစွဲအချိန်ရေတွက်လျှင်။ သမ္မတအိုဘားမားနောက်ဆုံးရုံးများအတွက်သို့ပွေးလေ၏သောအခါ, iPhone ကိုသေးစတင်ခဲ့ကြရသည်။ အခုတော့အမေရိကရှိအဟောင်းမော်ဒယ်များ outnumber စမတ်ဖုန်းများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုထက်သုံးပုံတပုံအိပ်ရာထဲကရတဲ့မတိုင်မီအွန်လိုင်းရ။
ပျမ်းမျှလူတဦး, 400, တစ်လလေးဆ 2007 အရေအတွက်ကို texts အကြောင်းကိုမသက်ဆိုင်အသက်, ပို့ပေးသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ: ဤအတောအတွင်းစာရိုက် blinking ကဲ့သို့ဖွစျခဲ့သညျ။ ပျမ်းမျှဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအံ့ဖှယျ 3,700 အဆိုပါ 2007 ကိန်းဂဏန်းထက်နှစ်ဆ, တစ်လ texts process လုပ်တယ်။ ထိုသာမန်, နေ့တိုင်း Cyborg ထက်ပိုသုံးပုံနှစ်ပုံ, ကိုယ့်ကိုယ်ကို, အစီရင်ခံစာတကယ်တော့ဘာမျှဖြစ်ပျက်အခါသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုတုန်ခါမှုခံစားပါဝင်သည်။ သုတေသီများက "Phantom-တုန်ခါမှု syndrome ရောဂါ။ " ခေါ်
Justin Metz နေဖြင့်ဓာတ်ပုံဥပမာ
စုစုပေါင်းပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းတစ်ချိန်ကကျောက်ကပ်ကျင်းပသူဆွဲ၎င်း၏မြင်းစီးသူရဲကိုအောက်ထဲကနေအထဲက sprinted သောမြင်းကိုသတိရခေါ်ဆိုပါ။ အဘယ်သူမျှမ Amish အနာဂတ်အချို့ကြင်နာဘို့ငြင်းခုံနေပါတယ်။ သို့သော်သုတေသနပြုယခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအင်တာနက်ကို "ပဲ" အခြားပေးပို့သည့်စနစ်မဟုတ်ကြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခုလုံးအသစ်အစိတ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်, လူ့စိတ်ကိုတစ်ဦးချည်ငင်တူရိယာ panel ကိုဖြစ်လာဘယ်မှာသဘာဝတရား၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြည်နယ်ဖန်တီးနှင့်လူအနည်းငယ်ငြိမ်ဝပ်စွာရှင်သန်ရပ်တည်ပါလိမ့်မယ်။
"ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအဖြစ်အရေးကြီးသောနှင့်မကြုံစဖူးအဖြစ်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုပိုကောင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကို-နှင့် rewiring မဟုတ်ပါဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းစာအုပ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောသူသည်ဆူ Greenfield, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကဆေးဝါးဗေဒပါမောက္ခကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကလေးတွေများအတွက်အများဆုံးအံ့သြစရာကမ္ဘာကြီးဖန်တီးနိုင်ပေမယ့်ကျနော်တို့ငြင်းပယ်နေနှင့်လူသည်ဤနည်းပညာများသို့ sleepwalk လျှင်ဖြစ်ပျက်နှင့် glassy-eyed ဖုတ်ကောင်တက်အဆုံးသတ်မသွားပါ။ "
အင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအရူးစေပါသလား မနည်းပညာကိုယ်တိုင်ကဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာမရှိပါ။ သို့သော်တစ်ဒါဇင်ကျော်တိုင်းပြည်များမှတွေ့ရှိချက်တစ်ခု Newsweek ပြန်လည်သုံးသပ်အလားတူဦးတည်ချက်အတွက်ညွှန်ပြအဖြေကိုတွေ့။ ပတေရုသ Whybrow, UCLA မှာ Semel အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အင်စတီကျုနှင့်လူ့အပြုအမူ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, စိတ်ကျရောဂါပို်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကိုနောက်ကောက်၏သံသရာပိုဆိုး "ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်ကင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏" စောဒကတက်သည်။ အင်တာနက်ကို ", သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပေနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်သူတို့ကိုစွန့်ခွာဘူး, သူတို့လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ပြုမူစေပါဘူးလူတွေကမသိကြောင်းအပြုအမူစေပါတယ်" အဘယ်သူ၏စာအုပ်တွင်အဆိုပါရေတိမ်ပိုင်းက Nicholas Carr က, ပြောပါတယ်, သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်က်ဘ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးပူလစ်ဇာများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရ ဆုချီးမြှင့်။ ဒါဟာ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ obsessive, မှီခိုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလှုံ့" Larry ကရို, ဆယ်စုနှစ်များအတွက် Net ကရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြုခဲ့သူတစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာရှင်ကထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာ "အားပေး-နှင့်ပင်-စိတ္တဇအားပေးအားမြှောက်။ "
အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာစွဲ-မဖော်ပြသည့်မကြာခဏ related ADHD နဲ့ OCD ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်ကြောက်လန့်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာတည်မြဲမှုမမှန်-ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်အများစုကိုများအတွက် naysayers မကြာခဏ puckishly, စွာတည်လေ၏။ "နောက်တစ်ခုကဘာလဲ? မိုက်ခရိုဝေ့အလွဲသုံးစားမှုနှင့် chapstick စွဲ? "ဦးဆောင်စိတ်ရောဂါဂျာနယ်များများထဲမှတစ်ဦးရွယ်တူရှိ reviewer 2006 အတွက်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတစ်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှုငြင်းပယ်ရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်စက်-လူ့ interaction ကတစ်ကဏ္ဍပါဝင်ပါဘယ်တော့မှသိရသည်။
Mitt Romney ၏ Class-Warfare Edge
သို့သော်အမြင်ဟာတနေရာပေါ်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ကို DSM လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိလိုက်သောအခါအဘို့ tagged တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲအတွက်ဆိုသော်ငြား, အင်တာနက်စွဲရောဂါ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် "နောက်ထပ်လေ့လာမှု။ " တရုတ်, ထိုင်ဝမ်, နှင့်ကိုရီးယားမကြာသေးမီကရောဂါလက်ခံခဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးအဖြစ်ပြဿနာ Web ကိုအသုံးပြုမှုကိုကုသစတင်ခဲ့သည် သင်္ချိုင်းတွင်းကိုအမျိုးသားရေးကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း။ လူသန်းပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီ (နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သလောက်) အများအားဖြင့်ဂိမ်းကစားခြင်း, virtual reality နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာက Internet-စွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရာသူတို့အားနိုင်ငံများမှာတော့ဇာတ်လမ်းစိတ်လှုပ်ရှား Front-စာမျက်နှာသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းတစ်ဦးကို virtual ကလေးအာဟာရစဉ်တစ်ခုမှာလူငယ်စုံတွဲသည်သေခြင်းရန်၎င်း၏မွေးကင်းစကလေးလျစ်လျူရှု။ တစ်ဦးကလုလင်ကိုသေဆုံးသူများသူချွတ် log အကြံပြုခြင်းများအတွက်မိမိအမိကိုရိုက်နှက်ကြကြောင်း (ပြီးတော့ပိုပြီးနာရီအထိထိန်သိမ်းဖို့သူမ၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြု) ။ အနည်းဆုံးတဦးတည်း-click ခေါက်ဆွဲဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး 10 Ultra-က်ဘ်အသုံးပြုသူများအ, လွန်းရှည်လျားထိုင်လျက်ကနေသွေးခဲ၏သေဆုံးခဲ့ကြသည်။
အခုတော့ကိုရီးယားအစိုးရကုသမှုစင်တာများငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်လူငယ်များများအတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့် Web ကိုပိတ်ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ တရုတ်, အတောအတွင်းကြောင့်အချို့သောဆရာဝန်များကအင်တာနက်စွဲဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံဖို့ Electro-ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောရိုက်နှက်ခြင်းကို အသုံးပြု. ခဲ့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ကြောင့်ချဉ်းကပ်ရန်လှည့်, ဘေးကင်းလုံခြုံ Web ကိုအလေ့အထတစ်ခုမိခင်များ '' ဘာသာရေးစစျပှဲစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
"စွဲလမ်းဖွင့်သောအလတ်စားအကြောင်းကိုတစ်ခုခုပဲရှိပါတယ်," ဧလိယ Aboujaoude သူဟာ obsessive compulsive Disorder ဆေးခန်းနှင့် Impulse Control ကို Disorders ဆေးခန်းညွှန်ကြားဘယ်မှာဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, မှာစိတ်ရောဂါကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မစွဲလမ်းအပြုအမူ-သို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး-ဖြစ်လာအင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်ဤသည်အခြားနည်းပညာများမှတဆင့်စွဲ၏ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမရှိသမိုင်းရှိသည်သောလူနာအများအပြားမြင်ကြပါတယ်။ "
ပြဿနာက Web အလေ့အထ (puckishly ပယ်ချခံခဲ့ရသောတဦးတည်း) ၏သူ၏အ 2006 လေ့လာမှုနောက်ပိုင်းတွင်က်ဘ်ရဲ့တွန်းလှန်သှေးဆောငျကနေမျှော်လင့်ထားသည့်ထပ်မံကျတွေအကြောင်းသည်သူ၏မကြာသေးခင်ကစာအုပ်နီးပါးသင်, များအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်း, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ တောင်မှလူလတ်ပိုင်းကြိုးဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများသည်-ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်, သူ့ 40s အတွက်အဖြူကြီးနှင့်တစ်နှစ်-Aboujaoude ရှစ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုသည့် Net ကတစ်ခုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ attachment ကိုအနည်းဆုံးတဦးတည်းနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ $ 50,000 ထက်ပိုအောင်တဲ့လူဦးရေအချိုးအစားအကြား ။ လူတွေပြီးသားအွန်လိုင်းစုဆောင်းပိုမကြာသေးမီစစ်တမ်းများအာရှရှိသူများနှင့်အတူတစ်ဦးတန်းတူအပေါ်အမေရိကန်နံပါတ်များကိုတွေ့ပြီ။
အင်တာနက်ကိုစွဲ၏ဦးနှောက်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲ၏ဦးနှောက်နဲ့တူတွေအများကြီး scan ။ (Mariette Carsten / Hollandse Hoogte-Redux)
ထိုအခါနေ့အဘို့အားလုံးက်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာကိုစှနျ့လှတျဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတစ်ဒိုင်ယာရီကိုစောင့်ရှောက်ရန် 2010 တက်ရောက်မေးမလျှောက်သောမေရီလန်းရဲ့ 200 "Unplugged" စမ်းသပ်မှုတက္ကသိုလ်ရှိ၏။ "ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်မှီခိုဆီးရီးယားနဲ့အစ်စဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုမှာတဦးတည်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ "မီဒီယာကိုငါ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်" ဟုအခြားရေးသားခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးနှစ်ခုကအခြားကျောင်းများပင်သင်တန်းသားများမရှိခြင်းများအတွက်မြေပြင်ကိုချွတ်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ "အများစုကကောလိပ်ကျောင်းသားများကမ္ဘာကိုသူတို့ရဲ့မီဒီယာလင့်များမပါဘဲဖြစ်ရုံဆန္ဒ, ဒါပေမယ့် function နိုင်ခြင်းမဟုတ်," မေရီလန်းတက္ကသိုလ်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ထိုနှစ်တွင်ပင်ထိုင်ဝမ်နှစ်ခုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်က iPhone စွဲရောဂါ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေ့အကျင့်ကနေနှစ်ခုအမှုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်: တဦးတည်းကသူ့ iPhone ကိုအသုံးပြုမှု 24 နာရီတစ်ရက်ရောက်ရှိပြီးနောက်တစ်ဦးခိုလှုံခွင့်အတွက်တက်အဆုံးသတ်သူတစ်ဦးက high-ကျောင်းကကောင်လေးတစ်ယောက်ပါဝင်ပတ်သက်။ အခြားကားမောင်းနေစဉ်သူမ၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သူတစ်ဦး 31 နှစ်အရွယ်ကုန်ရောင်းသူ featured ။ တစ်ချိန်တည်းမှာဖြန့်ချိသည် iPhone အလေ့အထတစ်ခု 200-လူတစ်ဦးစတန်းဖို့ဒ်လေ့လာမှုအဘို့မဟုတ်လျှင်နှစ်ဦးစလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုချွတ်ရယ်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာ 10 အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တဦးတည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖုန်းကိုရန် "အပြည့်အဝစွဲ" ခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။6ရာခိုင်နှုန်းကအခြားမည်သူမဆိုမိမိတို့၏ဖုန်းများကိုမထိကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်စဉ်အားလုံးပေမယ်နမူနာ၏3ရာခိုင်နှုန်း, မလှူအချို့အဆင့်ကိုဝန်ခံခဲ့သည်။
Web ကိုရဲ့ရောဂါဗေဒစေးကပ်ကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသာပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်, ကတည်းကနှစ်နှစ်အတွင်း။ ဧပြီလများတွင်ဆရာဝန်များကတစ်ခုသို့ရာတွင် uptick အကြောင်းကိုအိန္ဒိယ၏ Times သတင်းစာကိုပြောသည် "Facebook ကိုစွဲ။ " အမေရိကားရဲ့ Web စွဲ၏နောက်ဆုံးပေါ်အသေးစိတ် hucksterish ခေါင်းစဉ်နေသော်လည်း, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး၏ imprimatur နှင့်တကွကြွလာတော်မူသော, Larry ကရိုရဲ့အသစ်စာအုပ်, iDisorder အတွက်တွေ့ရှိ အကြီးဆုံးပညာသင်နှစ်ထုတ်ဝေသူ။ သူ့အဖွဲ့, သူတို့ရဲ့နည်းပညာအလေ့အထများထိုအလေ့အထများနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်၏စံစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီးရီးမှာမိမိတို့ရမှတ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအသေးစိတ်, တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားသန်းခေါင်စာရင်းကိုယ်စားပြုသူကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတစ်ပြန့်ပွား 750 လူတွေစစ်တမ်းကောက်ယူ။ သူက "တိုင်း 50 မိနစ်။ " အများဆုံးဖြေဆိုသူ, 15 အသက်ကျော်သူများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ "အပေါငျးတို့သကာလ" ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လူမှုကွန်ယက်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သို့မဟုတ် ပို. စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်မှာသူလည်းသူများအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သူတွေ့ရှိခဲ့ အွန်လိုင်းကိုပိုပြီး "compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ " ခဲ့
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်: အွန်လိုင်းအရှိဆုံးအချိန်လိုသူကအရမဖြစ်မနေခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့တွင်ဤအသုံးပြုသူများကိုအတိအကျဒါချိတ်ဆက်ဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ဒါဟာ 45 လေ့လာမှုနှုန်း, လက်နက် '' လက်လှမ်းမမီအတွင်းအိပ်ခန်းမှာသူတို့ရဲ့ဘလက်ဘယ်ရီကိုစောင့်ရှောက်ရန်လူငယ်အများစုကော်ပိုရေးရှင်းန်ထမ်း (အောက်တွင် 2011 နှင့်) မောင်းနှင်ကြောင်းအတော်လေးအခမဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ, သို့မဟုတ်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုနောက်ထပ် 2011 လေ့လာမှုနှုန်း, ထိုသူတို့အနေဖြင့်ကွာအလုပ်အတူစစျဆေးနိုငျဒါအပန်းဖြေ၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းကလက်ပ်တော့သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းတစ်လျှောက်ဆောင်ကြဉ်းစေသည်; သို့မဟုတ်အခမဲ့သူတို့နှိုးဆော်လျှင်, ညဉ့်အလယ်၌, အိပ်ရာမဝင်မီမိမိတို့၏ဖုန်းများစစ်ဆေးစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများကဦးဆောင်ကြောင်းရွေးချယ်မှုနှင့်နှိုးထ၏မိနစ်အတွင်း။
• Octomom: ငါကတွားတာမဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ကဒီနည်းပညာကိုသုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခံရဖို့ထင်ရှားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရေတိုရေရှည်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အလားအလာကမှဆွဲငင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါခေါင်းလောင်းဖြေဆိုခြင်းအဘို့, dopamine တစ် squirt တိုင်း ping ရဲ့လူမှုရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး Mini-ဆုလာဘ်ရယူပါ။ "ဒီဆုလာဘ်အများကြီးအသစ်တစ်ခုကဒ်စားပွဲပေါ်မှာတာမျိုးအဖြစ်လောင်းကစားသမားအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့် frisson တူမလှူအင်ဂျင်အားသွင်းကြောင်းစွမ်းအင် jolts, အဖြစ်အစေခံ," MIT ကမီဒီယာပညာရှင် Judith Donath မကြာသေးမီကသိပ္ပံအမေရိကန်ကိုပြောသည်။ "တိုးပွားလာသော, အကြိုးသကျရောတှနျးလှနျဖို့အစွမ်းထက်နဲ့ Hard ဖြစ်၏။ "
မကြာသေးမီကကြောင့်ဦးနှောက် rewire Web ကိုအသုံးပြုမှုကိုဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2008 ဂယ်ရီအသေးစား, UCLA ရဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ဦးခေါင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းဟာသုတေသနစင်တာပင်အလယ်အလတ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၏ရလဒ်အဖြစ်ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ 24 လူများ, သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကိုအတွေ့အကြုံရက်ဘ်အသုံးပြုသူများသူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကိုသာမန်တက်ဝိုင်း, သူသည်ဦးနှောက်စကင်နာမှတဆင့်သူတို့ကိုတစ်ဦးချင်းစီလွန်။ အဆိုပါခြားနားချက်က်ဘ်အသုံးပြုသူများအအခြေခံကျကျပြောင်းလဲ prefrontal Cortex ပြသဖြင့်, သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အံ့အားသင့်လာမယ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောတစ်ပါတ်အဘို့အသှားနှင့်အွန်လိုင်းငါးနာရီစုစုပေါင်းသုံးဖြုန်း, ပြီးတော့အခြားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဘို့ပြန်လာခိုင်းတယ်။ "ဒီနုံဘာသာရပ်များပြီးသားသူတို့ရဲ့ဦးနှောက် rewired ဖူး" ဟုသူကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းကပိုအချိန်ဖြုန်းရသောအခါဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သောအကြောင်း darkly musing, ရေးသားခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကိုစွဲ၏ဦးနှောက်, ကထွက်လှည့်, မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲ၏ဦးနှောက်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ ဇန်နဝါရီလအတွင်းထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့တရုတ်သုတေသီများကမြန်နှုန်း-in ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုစွဲချက်တင်သည့်ဒေသများအဘို့တည် "ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူကိစ္စ" -essentially အပိုအာရုံကြောဆဲလ်တွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပြိုင်လေ့လာမှုဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်အတွက်အလားတူပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးလေ့လာမှုများ, 10 ၏ "မီးခိုးရောင်အမှု၌ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်," အမည်ရကျုံ့မိန့်ခွန်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်တာဝန်ရှိဦးနှောက်, မှတ်ဉာဏ်, မော်တာထိန်းချုပ်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဧရိယာ၌ရာခိုင်နှုန်းကို 20 မှအင်တာနက်စွဲလမ်းကိုလင့်ထားသောသည်အခြားတရုတ်ရလဒ်များ၏ဒေါက်ပေါ်လာ အာရုံခံနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။ ပိုဆိုးသည်ကျုံ့ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှနှင့်: ပိုအချိန်အွန်လိုင်းပိုမိုဦးနှောက်၏အရိပ်လက္ခဏာပြသ "ကျုံ့။ "
ဦးနှောက် Scan ဖတ်ပထမဦးဆုံးလာသောထုတ်ဖေါ်ကြဘူးသော်လည်း, အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများစွာကို Clinician မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခံစားရတယ်။ "ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးထကြွလွယ်သောဖြစ်လာနေနည်းနည်းသံသယရှိပါတယ်" စတန်းဖို့ဒ်ရဲ့ Aboujaoude ပြောပါတယ်, ဤဘို့တအကြောင်းပြချက်နည်းပညာအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူက OCD အတွက်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ADHD ရောဂါ, နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အတွင်း 66 ရာခိုင်နှုန်းကိုထမြောက်တော်မူပြီရာတို့၏အဆုံးစွန်မှထောက်ပြသည်။ "တစ်ဦးအကြောင်းနှင့်အကျိုးရှိပါသည်။ "
ထိုမျှမကဆိကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုထားတဲ့ "အင်တာနက်ကိုစှဲလမျးသူ" နှင့်ယောဟန်ဆိုးကျိုးပြည်သူ့အကြားကွာဟမှုလည်းမရှိခဲ့ချေဖို့ပါးလွှာသည်။ စွဲလမ်းများအတွက်အစောပိုင်းအလံတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းထက်ပို 38 နာရီတစ်ပတ်ဖြုန်းခဲ့သည်။ ကြောင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကအလုပ်များရက်သတ္တပတ်ရဲ့လျှင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲပိုင်း, အင်္ဂါနေ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းယခုအားလုံးစွဲဖြစ်ကြသည်။ အင်တာနက်စွဲများအတွက်လက်ရှိစမ်းသပ်မှုဟုတ်ပါတယ်, သူတို့က, နာမငြိမ်လျှို့ဝှက်ဒါမှမဟုတ် Web ကိုအတူသူတို့ထပ်တလဲလဲပြန်ဖြတ်ဖို့မအောင်မြင်အားထုတ်မှုဖန်ဆင်းသောအာရုံမစိုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသူတွေကိုအပါအဝင်တစ်ဦးမသက်မသာကျယ်ပြန့်ပိုက်ကွန်ကို, ချ. , အရည်အသွေးရှိပါတယ်။ ဒီကျန်းမာရေးအန္တရာယ်လျှင်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအများအပြားအမေရိကန်တွေကောင်းစွာဖြစ်ချင်ကြပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။
စွဲလမ်းကဲ့သို့ပင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ် connection ကိုတစ်ဦးအနီးရယ်စရာကောင်းသောအခိုင်အမာတခါလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 1998 Carnegie Mellon လေ့လာမှုတစ်ဦးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်း Web ကိုအသုံးပြုမှုကိုအပြာစိတ်ခံစားမှု, အထီးကျန်ဆန်နှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမိတ်ဆွေဆုံးရှုံးမှုဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာသာရပ်များအားလုံးဝေဖန်သူများကနှာခေါင်းရှုံ့လိုက်, Pittsburgh ၌နေ၏။ ထို့အပြင် Net ကသငျသညျကြက်သားဟင်းချိုဆောင်ကြဉ်းမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကအထီးထီးနေခြင်း၏အဆုံး, မိတ်ဆွေတစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွာ, သင်ရသေးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုဆိုလိုသည်။ Carnegie Mellon နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သံမဏိစီးတီး၏ denizens နှင့်အတူပြန် check လုပ်ထားသည့်အခါသေချာလုံလောက်အောင်, သူတို့သည်အစဉ်ထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်ကျီးကန်းပြန် wire ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်မှာတော့မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများမူရင်း Carnegie Mellon တွေ့ရှိချက်ကော်ပီပွားယူကြပြီးပိုမိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွာထွက်ဆွဲထားတဲ့သည်ပိုမိုဆိုးရွားသူတို့ခံစားရဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, သူတို့ကိုတိုးချဲ့။ Web ကိုအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏအိပ်စက်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်အောင်, chirpiest ဝိညာဉျကိုကမောက်ကမနိုင်သမျှသောမျက်နှာ-to-မျက်နှာဖလှယ်မှု, နေရပ်စွန်ခွာ။ ဒါပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သက်ရောက်မှုတစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်အဘို့ဖြစ်သည်လိုင်းချနှစ်ပေါင်းမသာကြာရှည်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ 1990s အတွက်ဆယ်ကျော်သက် Web ကိုအသုံးပြုမှုကနေဒေတာတွေကိုအပျေါအခွခေံတစ်ဦးကမကြာသေးမီကအမေရိကန်လေ့လာမှုငယ်ရွယ်လူကြီးတွင်အွန်လိုင်းအချိန်နှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်အကြားဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Case Western Reserve တက္ကသိုလ်မှာပညာရှင်များစိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်သတ်သေစဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာစာရိုက်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေချိန်မှာတရုတ်သုတေသီများကအလားတူ, မိုးသည်းထန်စွာ Net ကအသုံးပြုခြင်းနှင့် Full-လွစိတ်ကျရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြား "ဟာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု" တွေ့ပြီ။
ဤလုပ်ငန်းကိုတုံ့ပြန်မှာဂျာနယ်အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကလေးအထူးကု "? 'Facebook မှာစိတ်ကျရောဂါ' 'ဟုခေါ်တွင်သစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်း" ၏မြင့်တက်မှတ်ချက်ပြုခြင်းနှင့်ကရှင်းပြတယ် "ဟုအဆိုပါအွန်လိုင်းကမ္ဘာ၏ပြင်းထန်မှုစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ " ဆရာဝန်များ, ထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံစာအရသိရသည် ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီအသုံးပြုပုံတိုင်းနှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးရေးသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးပြုမှုမေးခွန်းများကိုအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ရို, iDisorder ၏စာရေးဆရာ, သုတေသနပြ၏သဘောအရဆိုလျှင်ရန်အဖြစ်ရန် "အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, instant messaging, အီးမေးလ်ပို့ခြင်း, chatting နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြား, စိတ်ကျရောဂါများအကြား link တစ်ခု" ထောက်ပြသည် "ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေး။ " ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်း-နိုင်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဤအလားအလာလိမ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမကောင်းတဲ့လူ့အတွေ့အကြုံများ-ဒီတော့ဘုံ: ပြဿနာကိုအရည်အသွေးကိုအဖြစ်အရေအတွက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အတူတကွတစ်ယောက်တည်းသူမ၏စာအုပ်အဘို့, MIT မှစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်သူရှယ်ရီ Turkle အွန်လိုင်းသူတို့ဘဝအကြောင်းကိုသူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် 450s အတွက်, သူတို့ထဲကအများစုဟာ 20 ကလူထက်ပိုပြီးမေးမြန်းထားသည်။ သူမနှစ်ဦးကိုကြိုတင်နည်းပညာ-အပြုသဘောစာအုပ်ရေးသားသူင်နှင့်တစ်ကြိမ်က Wired မဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးချီးမြှောက်ခဲ့စဉ်နှင့်အညီ, သူမယခုဝမ်းနည်းထုတ်ဖော်ပြသ, အလေးပေးထွက်လူများကမ္ဘာကြီး Doritos မွမှေုနျ့၌ coated နဲ့သူတို့ရဲ့စက်တွေနဲ့ dystopian ဆက်ဆံရေးအတွက်သော့ခတ်။
ပြည်သူ့မှာအားလုံးရှိတယ်, ကလေးများလေးနက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရနိုင်ပါမိခင်နှင့်ဘိုးဘေးတို့ကိုဖော်ပြရန် "။ ချိုထံမှလာရှိရာအရပျကို" မိမိတို့၏ဖုန်းများနှင့် laptop သူတို့ဘဝအတွက် "မျှော်လင့်ချက်အဘို့အရာအရပျ" သောသူမ၏ပြောပြပစ္စုပ္ပန်နှင့်သေးဘူး။ "သူတို့စာပို့အဖြစ်မိခင်များယခုသူတို့ရဲ့ကလေးနို့နှင့်ပုလင်း-အစာကျွေးနေကြတယ်" ဟုသူမကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကအမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံးကိုပြောသည်။ "စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကတင်းမာနေဖန်ဆင်းတစ်ဦးကမိခင်ကလေးသူငယ်အခနေဖြင့်တင်းမာနေအဖြစ်ကြုံတွေ့လိမ့်မယ်။ ထိုကလေးသည်မိခင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွင်းမှလာမယ့်အဖြစ်ကြောင့်တင်းမာမှုပြန်ဆိုဖို့အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်နီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်ခံရဖို့လိုတစ်ခုခုပါပဲ။ နည်းပညာကိုအကျွန်ုပ်တို့အသက်တာအကြောင်းကိုငါသိ၏အရေးကြီးသောအရာများကိုမေ့လျော့စေနိုင်သည် "သူကဆက်ပြောသည်" ။ "
စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုဒီရေငွေ့ပျံလည်းသူမကတွေ့ဆုံမေးမြန်း high-school- နှင့်ကောလိပ်အရွယ်ကလေးတွေအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ဝိသေသလက္ခဏာ flux ၌တည်ရှိ၏သည့်အခါသူတို့ကတစ်ဦးနှစ်အရွယ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားတွေကိုနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ "ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အဘယ်အရာကို" Stan အမည်ရှိဆိ profile များကို, profile များကို, profile များကိုခဲ့ပါတယ် "Turkle ပြောသည်; တစ်ငါ့ကိုလုပ်ပုံကို။ "ဒါဟာအာရုံကြော-ယူပြီးသင်ယူမှုကွေးရဲ့ဘဝအပေါ် webcam နှင့်အတူအများပြည်သူအတွက်လုံးဝနေထိုင်ခဲ့သည်အမှားမှတျတမျးတငျထားနှင့် shared ပို mockable တလျှောက်လာရာတစ်ခုခုကိုသည်အထိမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ။ သူသညျမိမိဖုန်းပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျအသစ် 100 မှ reply လုပ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်အဖြစ် "ဘယ်လောက်ကြာကြာငါဒီလိုလုပ်ဖို့ရှိသနည်း" အခြားဆယ်ကျော်သက်, ညညျးတှား။
MTV ရဲ့အစဉ်အမြဲရှိကထွက်ချပြီးခံရဖို့ရှိခြင်းအားဖြင့် "မော" နှင့်ကြည့်ဖို့ရှင်းရှင်းနိုင်ခြင်း, သူတို့ကအွန်လိုင်းကိုတင်ဘယ်သို့သောအားဖြင့် "သတ်မှတ်" အများဆုံးခံစားခဲ့ရသူတို့ရဲ့ Web ကိုအလေ့အထအပေါ် 13 နှစ်အရွယ်ကြည့်ရှု, ရန်၎င်း၏ 30- နေရာ၌ရှိနေသော်လည်းတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အဝေးထွက်ပျောက်ဆုံးကိုကြောက်ရွံ့။ "FOMO" ဟုအဆိုပါကွန်ယက်သည်ကတောင်းဆိုထားသည်။ "ငါသည်အဝတ်အချည်းစည်းခြောကျခြားဖွစျပွီးငတ်, ရူးနေဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရသည်ငါ့မျိုးဆက်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမွငျလြှငျ," Allen က Ginsberg ရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကြောင့်မြည်တမ်းလော့ဘိန်းဖြူတစ်ဦး "အမျက်ထွက်ပြင်ဆင်ချက်" အတွက်ရှာ, အရုဏ်မှာ "သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆွဲ" လူတို့နှင့်အတူဖွင့်လှစ်မယ့် beatnik rant စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာယနေ့အစားထိုးပုံရိပ်စိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးပေါ် Net က-and စိတ်ကျရောဂါလေ့လာမှုအားလုံး၏ saddest တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူမစ်ဆူရီပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာပြသ 216 ရာခိုင်နှုန်းကအဘယ်သူကို၏ 30 လေးတွေ၏ Real-time က်ဘ်အလေ့အထများခြေရာခံ။ ပြီးခဲ့သည့်လကထုတ်ဝေရလဒ်သည်, စိတ်ဓာတ်လေးတွေအီးမေးလ်, စကားပြောခန်း, ဂိမ်းတွေကကများနှင့်ဖိုင်မျှဝေခြင်းကိုပိုမိုနာရီအထိဝါး, အများဆုံးပြင်းထန်သောက်ဘ်အသုံးပြုသူများအကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သူတို့ကအစ, ဖွင့်လှစ်ပိတ်လိုက်, သူတို့ရှာတွေ့မှမျှော်လင့်သောအရာကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိရှာဖွေနေ, တဦးတည်းကစိတ်ကူးပုံဖော်သည်မဟုတ်, ပို. မကြာခဏ browser ကိုပြတင်းပေါက် switched ။
သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီသည်သူ၏ကျောင်းတွင်အလုပ်, အီးမေးလ်, နှင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတွေကကနှင့်အတူ, သူ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပွင့်လင်းတစ်ဦးချင်းစီက virtual world စောင့်ရှောက်ခြင်း, Doug လေးကိုယ်စားပြုပုံကိုထိန်းသိမ်းထားသူတစ်ဦးအနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားကဲ့သို့မြည်။ သူကသူ့အစစ်အမှန်ဘဝ "ပဲအခြားပြတင်းပေါက်" ကတညျးကြောင်း Turkle ပြောသည် "များသောအားဖြင့်မဟုတ်, ငါ၏အကောင်းဆုံးတည်း။ " ဒီခေါင်းနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိသနည်း သူမအံ့ဘွယ်သောအမှု။ ဒါကအပေါင်းတို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ scariest လိုင်းပါပဲ။
မကြာသေးမီကပညာရှင်များကကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာခြင်းများကို ပို၍ ပင်ခံရပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုလာကြသည်။ စတန်းဖို့ဒ်၌ဒေါက်တာ Aboujaoude သည်အချို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ (ယခု DSM တွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများဆိုင်ရာရောဂါ) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပြောင်းလဲမှုအတ္ထုပ္ပတ္တိများကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆဲလ်အချို့ကိုတရားဝင်၊ သူ၏စိတ်ကူးကိုစမ်းသပ်ရန်သူသည်လူနာတစ် ဦး ဖြစ်သူရစ်ချတ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုရက်ရက်စက်စက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဖဲချပ်စ်အလေ့အထ၊ ရလဒ်မှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်လူနာသုညအဖြစ်မြင့်မားသည်။ Sybil Dorsett ကိုမေးခွန်းလွှာကိုငါစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ Aboujaoude ရေးသားခဲ့သည်။
အဆိုပါရွှေညီအစ်ကိုတွေကို-ယောလ, နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါနှင့်မှ Ian, မြို့ McGill မှာအတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါထိုသို့ပြုမှသလိုပဲအများကြီးအဖြစ်, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, ဘေးဥပဒ်နှင့်စစ်မှန်သောစိတ္တပိုဆိုး, အဖြစ်မှန်နှင့်အတူလူတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုဖြတ်တောက်ရန်နည်းပညာရဲ့အလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးတက္ကသိုလ်-နေကြတယ် ဂျေဆန်စယ်, နောက်ကွယ်မှရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၏ဖြစ်ရပ်မှာ "Kony 2012 ။ " ဒီစိတ်ကူးကို real-နှင့်ခှဲ-ထက်နယူးမနည်းစိတ်ပိုင်းအွန်လိုင်းဘဝကိုကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့် modems အားဖြင့်အတူတူချုပ်နှင့် sutured အကြီးမားဆုံးမွို့၌အသက်, ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ကြောင်း, သို့သော် နယူးယောက်မြို့သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်။ "ဒီဒေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမားတဲ့မွို့တှငျနထေိုငျသောတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအသေးမြို့မှာတစ်စုံတစ်ဦးထက်စိတ္တ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာသောအမြင် support," မှ Ian ရွှေအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရေးသားခဲ့သည်။ "အင်တာနက်ကိုစိတ်ကူးယဉ်မြို့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်" ဟုသူကဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ "ဒါဟာတူညီတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအချို့ရှိပေလိမ့်မည်။ "
တဲလ်အဗစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတစ်ဦးကအသင်းအလားတူလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းသူတို့ "။ အင်တာနက်ကို-related စိတ္တ" သူတို့၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ပွားမှုများမှာယုံကြည်ဘယ်အရာကိုထုတ်ဝေအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် "စစ်မှန်တဲ့ psychotic ဖြစ်ရပ်" ဟုအဆိုပါစာရေးဆရာသတိပေးပေါ်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းချပြီးမတိုင်မီကောက်ချက်ချ။ "ဒီအင်တာနက်တွေအကြောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် psychopathology အတွက်၎င်း၏အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိမ်အသစ်သောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။ "
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအကြောင်းဘာလုပ်သလဲ? ပင်ကိုအကောင်းဆုံးသုတေသနပထမဦးဆုံးကြွလာသောအရာကို၏ timeless conundrum အတွက်ညိတွယ်နေသည်ကတည်းကတချို့ကဘာမှပြောပါလိမ့်မယ်။ လတ်က၎င်း၏အဲဒါကရှိနေခြင်း, အဆုံးမဲ့အာရုံပြံ့လှငျ့နှင့် missteps များအတွက်အများပိုင်လှောင်ပြောင်၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူပုံမှန်လူတွေကိုချိုးဖျက်ပါသလား? သို့မဟုတ်ပါကကျိုးသူတပါးတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆွဲဆောင်သနည်း?
ဒါပေမယ့်တစ်လမ်းထဲမှာကဒစ်ဂျစ်တယ်ပြင်းထန်မှုစိတ်ရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေကိုခံစားနေရပြီးဖြစ်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်တစ်လျှောက်အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအရေးမထားဘူး။ သူတို့ဘဝတွေရဲ့အလျင်သဖြင့်လွှမ်းကျနော်တို့အမေရိကား Xanax များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့ (နှင့်အဘယ်ကြောင့် benzodiazepines များအတွက် rehab ဝင်ခွင့်များ, Xanax နှင့်အခြား Anti-စိုးရိမ်စိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်း, နှောင်းပိုင်း 1990s ကတည်းကသုံးဆပါပြီ) ကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်ပေးသောဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, မှလှည့်။ ငါတို့သည်လည်းကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားအခါပင်အာရုံစူးစိုက်မှုကို saps ရာ multitasking ၏မိစ္ဆာကယ်ဆယ်ရေးများအတွက်ပေါက်။ နှင့်အင်တာနက်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရှိသမျှသည်သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ငါတို့ရှောင်ရှားရန်လိုချင်တာတွေဖြစ်သို့မဟုတ်ချင်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအများကြီးသတိအတွေးမပါဘဲ, ကလကျခံဖို့တော်မှာပါပြီ။ ခမျြးမွှေခွငျး၏ထိုနေ့ရက်ကာလကိုအဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုပုံဖော်ဖို့နေဆဲငါတို့ဥစ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ချိန်ခွင်လျှာ၌ရှိကြ၏။